कर्पोरेट – Page4– Weekly Nepal
काठमाडाैँ । शरीरका रक्तनलीहरूमा रगतको चाप बढी हुनु नै उच्च रक्तचाप हो । नलीहरूमा रगतको वेग सामान्यभन्दा बढी हुनु नै उच्च रक्तचाप हो । यसले शरीरका जुनकुनै अंगमा हानि पु-याउन सक्छ । मस्तिष्कघात, पक्षघात, हर्टअट्याक, मिर्गौला ड्यामेजजस्ता समस्या उच्च
डोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला डोटीमा डेङ्गु रोगबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लामै पहिलोपटक उक्त रोगबाट दिपायल सिलगढी नगरपालिका–६ थाप्लाकी ४२ वर्षीया छत्र मलासी ‘छायाँ’ को मृत्यु भएको हो । लामो समयदेखि टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने
काठमाडौँ । नेपाल मेडिसिटी अस्पताल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श बिच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा नेपाल मेडिसिटीका अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । अस्पतालका अध्यक्ष डा. महतोले
काठमाडौँ । नेपालमा वर्षेनी ७० प्रतिशत मानिसमा आँखाको ज्योती गुम्ने कारण मोतियाविन्दु रहेको पाइएको छ । नेत्र ज्योति संघ नेपालको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हुने अन्धोपनको मुख्य कारण मोतियाबिन्दु देखिएको हो । नेपालमा प्रत्येक सय जनामा शुन्य दशमलव ८१ प्रतिशत
काठमाडौं । काठमाडौंको धुम्बाराहीमा रहेको ह्याम्स अस्पतालले तीजको अवसरमा महिला दिदीबहिनीलाई ‘तीज स्पेशल वमन्स हेल्थ प्याकेज’ अन्तरगत ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । तीजको अवसरमा महिलाहरुले स्वास्थ्यमा पनि ध्यान जाओस् भन्ने उदेश्यका साथ होलवडी चेकअपमा ५० प्रतिशत छुट